TCL waa layaab: tani waa taleefankeeda fiidiyowga ah ee duuban | Androidsis
Sugitaanku weligiis buu ahaa, laakiin ugu dambayntii waxaan haysannaa telefoonnadii ugu horreeyay ee shaashadda la laaban karo. Waxayna umuuqataa in isbadalka soosocda uu noqon doono taleefannada casriga ah ee laysku halleyn karo. TCL-na waxay noqon kartaa soo saareheeda weyn.
Soo saaraha Aasiyaanka ayaa horeyba ugu dhawaaqay bartamihii Maarso kan jiritaanka telefoonka TCL ee laysku halleyn karo, laakiin waxba kamaanaan ogeyn naqshadeeda. Ilaa hadda. Wax walbana waxa weeye, laba fiidyow ayaa la duubay halka aan ka arki karno sida qalabkan xiisaha leh u shaqeyn doono.
TCL waxay ina siineysaa aragti mustaqbalka
Sida aad ku arki karto fiidiyaha hogaaminaya xariiqyadan, soo saaruhu wuxuu durba leeyahay laba nooc oo isdaba-joog ah oo hawlgal buuxa ah. Sida iska cad, waxaan wajaheynaa moodal labo sano ka hartay inuu suuqa gaaro, laakiin taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan helno fikrad ah nooca casriga ee mustaqbalka noqon kara.
Caadi ahaan, TCL waxay qabatay wax aad ugu eg wixii aan ku aragnay LG-yada is-beddelka Smart TV-yada. Sidan oo kale, gudiga ayaa loo kordhiyay si loo sameeyo leydi dheereeya oo ka soo bilaabmaya shaashad laba jibbaaran.
Fiidiyowgan labaad waxaan ku aragnaa furitaanka boosteejada ee qaabka duudduuban, halkaasoo labada dhinac gadaal looga duubay. Waana iska cadahay in shaashadaha duuban ay yihiin mustaqbalka. Sababta? Uma baahna boos dheeraad ah oo ay ku shaqeeyaan. Sababtoo ah guddiga ayaa loo duudduubay sida indhoole u oggolaanaya inuu soo saaro alaab aad u yar.
Sidii aan soo sheegnay, uma baahnid inaad dawanno ku garaacdid duulimaadka maxaa yeelay waxaan la kulannaa laba nooc. Waxay u badan tahay in ragga ka soo jeeda TCL Ka faa'iideyso daabacaadda soo socota ee CES ee Las Vegas, oo lagu qaban doono inta lagu jiro usbuuca koowaad ee Janaayo, si rasmi ah loogu muujiyo labadan nooc. Marka, illaa aan ka aragno taleefan leh astaamahan, waa inaan sugnaa sanad ama laba sano oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kani waa taleefanka lagu garto TCL ee fiidiyowga ah!